China Fast Coupling စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Donghuan
ကျွန်ုပ်တို့ အဓိကထုတ်လုပ်သည့် အမြန်အချိတ်အဆက်များသည် ခြေအိတ်များ၊ အခွံမာသီးများနှင့် ကပ္ပလီများ စသည်တို့မှ ထွက်ခွာသွားပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စံသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည် ပုံဆွဲဒီဇိုင်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် အတိုင်းအတာအားလုံးသည် တိကျစွာ စုစည်းရန် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ socket အားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး 100% လေဖိအားစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။မျက်နှာပြင်သည် ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်ထားသော အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော ထုတ်ကုန်ကိုလည်း တင်ပို့ပါသည်။
1.ကျွန်ုပ်တို့ အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် အမြန်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများသည် ခြေအိတ်များ၊ အခွံမာသီးများနှင့် ကွပ်များ စသည်တို့ကို ခွဲထုတ်ထားပါသည်။ စံသတ်မှတ်သတ်မှတ်မှုအားလုံးကို ပုံဆွဲဒီဇိုင်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် အတိုင်းအတာအားလုံးသည် တိကျစွာ စုစည်းရန် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ socket အားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး 100% လေဖိအားစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။မျက်နှာပြင်သည် ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်ထားသော အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော ထုတ်ကုန်ကိုလည်း တင်ပို့ပါသည်။
2.Fast fittings များကို သံမဏိ၊ PE နှင့် အခြားပိုက်များကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
3.Material: ကြိတ်၍ရနိုင်သော သံ
4. ရနိုင်သောအရွယ်အစား- 1/2''--2''
5.Advantage: ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းအသုံးအနှုန်းများ ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှိုပေါ်ရှိ မည်သည့်ပြဿနာကိုမဆို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ထုတ်ကုန်ပြဿနာသည် အချို့သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပေါက်များရှိသည်၊ သွန်းသောသံချောမွေ့စွာသွားနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် မှိုပေါ်တွင် အနည်းငယ်ပြုလုပ်ထားသည်။အချို့သော ကုန်ချောများကို ပုံသွင်းသောအခါတွင် နိမ့်သောကြောင့် ပုံသွင်းနည်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
6. မျက်နှာပြင် : ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သို့မဟုတ် အနက်ရောင်။ဇင့်အပေါ်ယံလွှာ- သွပ်ပြားဖြင့် ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ဇင့်အပေါ်ယံလွှာကို ပူပူနွေးနွေးကျုံ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
Pb တစ်ဦးချင်းကိစ္စများတွင် <1.6 1.8
7. အများဆုံးလည်ပတ်အပူချိန်: 80°C
8.After-sales ဝန်ဆောင်မှု- ဖောက်သည်သည် ယိုစိမ့်မှု၊ ကွဲအက်မှု၊ ကပ်ပြားကြီးကဲ့သို့သော ပြဿနာထုတ်ကုန်ကို တွေ့ရှိပါက၊ စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် တူညီသော အရေအတွက်ကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
ယခင်- Steam Coupling
နောက်တစ်ခု: Hose Mender
Hinged Pipe Clamp, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, Hose With Coupling, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, လျောက်ပတ်တယ်။, American Standard Fittings များ,